शरीरमा मुसा किन आउँछ? उपचार के? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
शरीरमा मुसा किन आउँछ? उपचार के?
स्वास्थ्यखबर शनिबार, असोज १६, २०७८, १०:२४:००
प्रश्न : शरीरमा मुसा किन आउँछ? उपचार के?
डा अनिलकुमार झाको उत्तर : मुसालाई अंग्रेजीमा वाट्स भनिन्छ। मुसा ह्युमन पेपिलोमा भन्ने भाइरसबाट हुने खटिरा वा विविरा हो। यो बच्चादेखि वृद्धालाई समेत पनि आउन सक्छ। यसलाई समाजमा सामान्य रुपमा लिइन्छ। मानिसको सोच नै मुसा आफैं ठिक भएर जान्छ भन्ने छ। तर यो ४० प्रतिशत मात्र आफैं ठिक भएर जान्छ। ४० प्रतिशतमध्ये पनि कस्तो व्यक्तिमा ठिक हुन्छ भन्न गाह्रो छ। त्यसैले शरीरमा मुसा आएपछि तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ।
मुसाले शरीर भित्र कुनै हानी गर्दैन तर यो भाइरसबाट हुने भएकाले एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा सर्ने, संख्या र आकार दुवै बढेर जाने हुन्छ। तसर्थ हेर्दा नराम्रो देखिने मुुुसाबाट अरुमा सर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। आफ्नै शरीरमा पनि एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा सर्ने हुँदा यसको उपचार गर्नु उचित हुन्छ। मुसा भएको व्यक्तिको सामान अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेमा मुसा सर्ने संभावना बढी हुन्छ। तर सर्ने र नसर्ने भन्ने कुरा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ भने त्यस्ता व्यक्तिमा मुसा सर्ने संभावना धेरै कम हुन्छ।
शरीरमा मुसा देखियो भने सुरुमा औषधि लगाउनु पर्छ। औषधि लगाउदा एक महिनामा सुधार भयो भने त्यहि औषधि नै लगातार प्रयोग गरिन्छ। तर औषधिले काम गरेन भने यसलाई अन्य उपचार बिधिले हटाउने गरिन्छ।
यदि शरीरमा धेरै मुसा भएमा र यी उपचार विधिबाट पनि हटाउन संभव नभएमा लेजर थेरापीबाट हटाउन सकिन्छ। साथै होमीयोप्याथिक औषधि पनि यो समस्यामा लाभदायक मानिन्छ। मुसा आएको सुरूकै अवस्थामा होमीयोप्याथिक औषधिको प्रयोगले मुसा आउन समेत रोक्न सकिन्छ। पैलता र हत्केलामा आउने मुसा खिलसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ। कतिपय व्यक्ति त पैतला र हत्केलामा आएको मुसालाई खिल भनेर झुक्किन्छन्। खिलमा किटाणु हुँदैनन्। त्यसैले खिल भनेर उपचार नगरी छाडेको मुसा बढेर जान्छ।
मुसालाई कहिले पनि धारिलो हतियारले काट्नु हुँदैन। काट्दा मासुको भाग गएता पनि भाइरस जिवितै रहन्छ। यसो गर्दा मुसा फेरि दोहोरीएर आउन सक्छ। काट्दा मुसाबाट एक किसिमको पानी जस्तो चोप निस्कन्छ। त्यो चोप नै सर्ने माध्यम बन्न पुग्छ। तर मुसा रगतबाट भने सर्दैन। योनाङ्गमा आउने मुसा पनि हुन्छ। सामान्य मुसा भन्दा यो भिन्न प्रकारको हुन्छ। यसको उपचार अलि कठिन छ साथै यो धेरै सर्ने पनि हुन्छ।
-(डा झा वरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ हुन्)